သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၃-၃) ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကိုကို အား တရားစွဲမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းစာရှင်းလင်းမည်
မြန်မာ့လေတပ်၏ ဗုံးကြဲမှုကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံသား ၄ ဦးသေဆုံး
သင်္ဘောနစ်မြုပ်မှု သေဆုံးသူ တိုးလာနိုင်ဟု လွှတ်တော်အမတ်ပြော
ရခိုင်တွင် ကမ်းရိုးတန်းသွား သင်္ဘောနစ်၍ ခရီးသည် ၁၀၀ ကျော်ပျောက်ဆုံးနေ
ရန်ကုန်မှာ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ကျောင်း သားတွေ သာယာဝတီထောင်ပို့
နေစွမ်းအင်သုံး ကမ္ဘာပတ်လေယာဉ် နောက်အပတ် မန္တလေးရောက်မည်
ကျောင်းသားသပိတ်ကို တရားလက်လွတ် အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းလိုက်တဲ့ အစိုးရရဲ့လုပ်ရပ်
မပြီးပြတ်သေးသည့် ပြဿနာ၊ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှု များနှင့် နေ၀င်ချိန်နီးလာ သည့် အစိုးရ – အောင်ထွန်းလင်း
လက်ပတ်နီ“တာဝန်”ပတ်ခွင့်အာဏာ ဘယ်သူပေးခဲ့လဲ – လင်းထိုက် (Y.I.T)
ပခုက္ကူမြို့ လောင်စာဆီဆိုင်တန်း မီးလောင် (ရုပ်/သံ)
ကျောက်ဖြူ-စစ်တွေ သင်္ဘော နစ်မြုပ်၊ ၁၀၀ ကျော်သေဆုံး
အောင်တံခွန် (၃)ခရီးသည်တင် ရေယာဉ် နစ်မြုပ်
အဖမ်းခံကျောင်းသားတွေ အမြန်ဆုံး လွှတ်ဖို့ ကုလတောင်းဆို
ထိုင်းတွင် မြန်မာအလုပ်သမား ၁ ဦး အသတ်ခံရ
လူ ၃၀၀ခန့် တင်ဆောင်လာသည့် အောင်တံခွန်သင်္ဘော နစ်မြုပ်၊ လူ ၇၀ခန့် သေဆုံးကြောင်း ကနဦး သတင်းရရှိ
တရုတ်ဘက် ကျတဲ့ဗုံးကိစ္စ မြန်မာသံအမတ်ကို ဆင့်ခေါ်ပြောကြား
မြန်မာလေကြောင်း ဗုံးကြဲ တရုတ် နယ်မြေထဲ ကျရောက်
ကျောင်းသားတွေအတွက် အမှုလိုက်ခွင့် ပယ်ချခံရ
အာဏာရှင်အမူအကျင့် မပျောက်သေးကြောင်း အရှင်ဆန္ဒာဓိက မိန့်ကြား
အကြမ်း​ဖက် ဖြိုခွဲ​မှု ကု​လ အပြစ်တင်
ဆွေးနွေးပွဲ KIA ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြစ်ကြီးနားမြို့ရောက်ရှိ
အောက်ခြေမှ နိုင်ငံသားများ၏ လူမူဘ၀သည် နိုင်ငံ၏ အခြေပြ ပြဂုပ်ဖြစ်သည်
Posted: 14 Mar 2015 07:00 AM PDT
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် လက်ပံတောင်း ကြေးနီ စီမံကိန်း၏ ပဋိပက္ခအတွင်းတွင် အာဏာပိုင်များ၏ မီးလောင်ဗုံးဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့် သံဃာတော်မျာ့း် ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရရှိခဲ့သည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို တရားမ၀င် ဖော့စ်ဖရပ် လက်နက်များ အသုံးပြုရန် စေခိုင်းမှု ပြုလုပ်သည်ဟုဆိုကာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကိုကိုအား တရားစွဲဆိုမည့် အကြောင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ အ
Posted: 14 Mar 2015 06:50 AM PDT
နေပြည်တော် မတ် ၁၄ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း မိုင်းယောင်း ဒေသအတွင်း စက်ဝိုင်းအင်အား ကုမ္ပဏီမှ ခဲသတ္ထုတူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်း စမ်းသပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိရာ မတ် ၁၂ ရက် ညပိုင်းတွင် RCSS/SSA အဖွဲ့မှ အင်အား ၁၀ ဦးခန့်သည် လက်နက်ငယ် ကိုယ်စီဖြင့် ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီလုပ်သား ၇ ဦးအား ဖမ်းဆီးကာ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နှင့် တွေ့လိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ရာ လုပ်သားများမှ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် မိုင်းယောင်းသို့ သွားနေကြောင်း ပြန်လ
Posted: 14 Mar 2015 06:41 AM PDT
မြန်မာ့လေတပ်ရဲ့ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် ကိုးကန့်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ ထိစပ်နေတဲ့ ယူနန်ပြည်နယ်၊ Lincang နယ်စပ်မြို့က ကြံစိုက်ခင်းကို မတ် ၁၃ ရက် နေ့လယ်ပိုင်းက ဗုံးထိမှန်ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံသား ၄ ဦး သေဆုံး၊ ၉ ဦး ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ ဆင်ဟွာသတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်အပေါ် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဒုဝန်ကြီး Liu Zhenmin က တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအအမတ်ကြီးကို ဆင့်ခေါ်ပြီး ပြစ်တင်ရှုတ်ချသလို
Posted: 14 Mar 2015 06:38 AM PDT
မတ် ၃ ရက်နေ့ ညက နစ်မြုပ်သွားတဲ့ အောင်တံခွန်သင်္ဘောက သေဆုံးသူဦးရေဟာ သက်ဆိုင်ရာက ကြေညာထားတဲ့ အရေအတွက်ထက် များနိုင်တယ်လို့ မြေပုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဦးဖေသန်းက ပြောပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာက သင်္ဘောလက်မှတ်ဖြတ်ထားတဲ့ ခရီးသည် ၂၀၀ ကျော်ထဲကနေ အလောင်းရရှိမှုကို နုတ်ပြီး ကျန်တဲ့သူ ကယ်တင်ရရှိခဲ့တယ်လို့ ပြောဆိုနေတာဖြစ်ကြောင်း၊ လိုက်ပါသွားတဲ့ ခရီးသည်တွေရဲ့ ပြောဆိုချက်အရ သင်္ဘောပေါ်မှာ ခရီးသည် ၄၀၀ လောက် လိုက်ပါ
Posted: 13 Mar 2015 11:28 PM PDT
ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းသွား သင်္ဘောတစ်စီးကို တွေ့ရစဉ်။ မတ် ၁၄ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ကမ်းရိုး တန်းသွား သင်္ဘောတစ်စီးနစ်ရာမှ ခရီးသည် အလောင်း ၂၃ လောင်းကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိထားပြီး လူပေါင်း ၁၀၀ ကျော် ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ နစ်မြုပ်သော သင်္ဘောမှာ အောင်တံခွန် (၃) သဘောင်္ဖြစ်ပြီး တောင်ကုတ်မြို့မှ စစ်တွေသို့ ထွက်ခွာလာရာတွင် နောင်တော်ကြီး ပင်လယ် ကလိန်တောင်ဘက်ခြမ်းတွင် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ ညနေ ၈ နာရီခွဲခန့် နစ်မြု
Posted: 13 Mar 2015 11:22 PM PDT
ကျောင်းသားသပိတ်က ဖမ်းဆီးထားသူတွေကို လက်ပံတန်းမြို့မှာ မတ်လ ၁ဝ ရက်နေ့က ရုံးထုတ်လာစဉ်။ Photo: Aung Ko Ko/RFA မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့ညသန်းခေါင်ကျော်မှာ ဖမ်းဆီးခံ လိုက်ရတဲ့ ဗကသ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုသီဟ ဝင်းတင်၊ ကိုမိုးထက်နေ နဲ့မဟန်နီဦးတို့ ၃ ဦးကို ရဲတပ်ဖွဲ့တွေက မနေ့နေ့လည်မှာ သာယာဝတီထောင်ကို ပို့လိုက်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ လက်ပံတန်း ကပင်မကျောင်းသားသပိတ် နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အတွက် ပဲခူးတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကိုလွှဲပေး လို
Posted: 13 Mar 2015 10:53 PM PDT
Solar Impulse2လေယာဉ် အိန္ဒိယကို ဆိုက်ရောက်စဉ်။ (မတ် ၁၁၊ ၂၀၁၅) နေရောင်ခြည် စွမ်းအင်ကိုသုံးပြီး ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် ကမ္ဘာကိုပတ်နေတဲ့ Solar Impulse2လေယာဉ်ဟာ မတ်လ ၁၀ ရက် အင်္ဂါနေ့က အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ရောက်နေပါပြီ။ အိုမန်နိုင်ငံ Muscat မြို့တော်ကနေ အာရေးဗျပင်လယ်ကို ၁၅ နာရီကြာ၊ ကီလိုမီတာ ၃၅၀၀၀ ခရီးကိုဖြတ်ပြီး ဒုတိယခရီးတထောက်အဖြစ် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ရောက်နေတာပါ။ လေယာဉ်ဆိုက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက် အများပြည်သူ
Posted: 13 Mar 2015 10:35 PM PDT
အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သပိတ်မှောက်ခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ သပိတ်ကတော့ မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့မှာ စစ်အရေခွံလဲ အစိုးရရဲ့ ရက်ရက်စက်စက်အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းခံလိုက်ပါပြီ။ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေရဲ့ အဲဒီလိုဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သပိတ်မှောက်မှုဟာ စကတည်းက အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းစွာ ချီတက် ဆန္ဒပြတဲ့၊ တတိုင်းပြည်လုံးအပေါ်ထားတဲ့ စေတနာအရ မှန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီပညာရေးစနစ်တခုရရှိဖို့ အမျိုး
Posted: 13 Mar 2015 10:31 PM PDT
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော သတင်းထောက်ဘ၀ အတွေ့အကြုံ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ စစ်ဝတ်စုံချွတ်ထားတဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဟာ မျက်နှာဖုံးကွာကျလာ . . . ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ လက်ထက်မှာ စစ်အစိုးရ လက်ထက်ကအတိုင်း အရပ်ဘက်လူရမ်းကားတွေ ကို သုံးစွဲတဲ့ဓလေ့ ရှိတုန်းပဲဆိုတာ သက်သေပြလိုက်ပါပြီ . . . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (4-1)-030၂၀၁၁ တုန်းက ပြည်သူ့ရင်ကို ထိေ
Posted: 13 Mar 2015 10:29 PM PDT
မိတီ်္ထလာ၊ မန္တလေး အဓိကရုဏ်းတွေတုန်းက တုတ်၊ ဓားကိုင်ထားတဲ့ ဘယ်ကရောက်လာ မှန်းမသိတဲ့ လူအုပ် ကြီးကြောင့် ကလေးငယ်၊ အမျိုး သမီးတွေနဲ့ လူပေါင်းများ စွာ သေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ လက် ပတ်နီ “တာဝန်”တွေကို ဘာလို့အကူအညီ မတောင်းခဲ့တာလဲ။ ပုဒ်မ ၁၂၈ အရ နီးစပ်ရာအမျိုးသားများကို အကူအညီ တောင်းနိုင်တယ် ဆိုရင် လက်ပတ်အနီတွေက ဘာလို့ ကြိုတင်တပ်ဆင်ပြီးသားဖြစ်နေတာလဲ။ ဘယ်သူက တာဝန်ခံပြီး လက်ပတ်အနီ“တာဝန်”ေ
Posted: 13 Mar 2015 10:22 PM PDT
ပခုက္ကူမြို့ မြိုင်သာယာ လောင်စာဆီဆိုင်တန်းမှာ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ ည ၁၂ နာရီခွဲအချိန်က မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဆီဆိုင်တန်းနေရာမှာ ည ၁၂ နာရီခွဲက လောင်ခဲ့တဲ့မီးက ၂ နာရီအချိန်မှာ ပြန်လည်ငြိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပခုက္ကူမြို့ရှိ မီးသတ်ကားတွေသာမက ရေစကြိုမြို့၊ မြိုင်မြို့၊ ညောင်ဦးမြို့က မီးသတ်ကားတွေပါ လာရောက်ဝိုင်ဝန်းငြိမ်းသတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီမီးလောင်မှုမှာ လောင်စာဆီအရောင်းဆိုင် ၅ ဆိုင် ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့
Posted: 13 Mar 2015 10:20 PM PDT
ကျောက်ဖြူ ဆိပ်ကမ်းကနေ စစ်တွေကိုသွားတဲ့ အောင်တံခွန် ၃ သင်္ဘောဟာ မနေ့ည ၈ နာရီလောက်က မြေပုံမြို့နယ် ငပယုန်ကျွန်းနှင့် မြောက်ကျွိန်ကျွန်းအနီး အရောက်မှာ ရုတ်တရက် လှိုင်းပုတ်ပြီး တိမ်းစောင်းနစ်မြုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသဘောင်္ပေါ်မှာ လူဦးရေ ၃၀၀ လောက် လိုက်ပါသွားပြီး ၁၇၀ လောက်ကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ကျောက်ဖြူမြို့ခံ သတင်းသမား ကိုထွန်းထွန်းနိုင်က ပြောပါတယ်။ ဒီကနေ့မနက် ၉ နာရီခွဲအထိ အလောင်း ၁၁၀ ကျော် ရရှိထားတယ်
Posted: 13 Mar 2015 10:11 PM PDT
အောင်တံခွန် ၅ ရေယာဉ်အားတွေ့ ရစဉ် နေပြည်တော် မတ် ၁၄ တောင်ကုတ်မှ စစ်တွေသို့ ပြေးဆွဲသော ခရီးသည်တင် ရေယာဉ် အောင်တံခွန် (၃)သည် မတ်လ (၁၂) ရက်နေ့ ည (၉) နာရီအချိန်တွင် တောင်ကုတ်မြို့မှ ထွက်ခွာလာပြီး မတ်လ (၁၃) ရက်နေ့ နေ့လည် (၁၂)နာရီ (၃၀)မိနစ် အချိန်တွင် ကျောက်ဖြူဆိပ်ကမ်း သို့ ရောက်ရှိ ခဲ့သည်။ ခရီးသည်များ တင်ဆောင်ပြီး မတ်လ (၁၃)ရက်နေ့ ညနေ (၄)နာရီ (၅) မိနစ် အချိန် တွင် ကျောက်ဖြူမှ စစ်တွေသို့ ပြန်လည်ထွက်
Posted: 13 Mar 2015 08:14 PM PDT
သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများအား ဖမ်းဆီးနေစဉ်။ (မတ် ၁၀၊ ၂၀၁၅) ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ သပိတ်မှောက် ကျောင်းသူကျောင်းသား (၁၀၀)ကျော်ကို့ ခြွင်းချက်မရှိ ချက်ခြင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ မဟာမင်းကြီးရုံးက မြန်မာအစိုးရကို တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ သပိတ်ကို ဖြိုခွဲနှိမ်နှင်းရာမှာလည်း အင်အားကို မတန်တဆ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ အတွက် မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကို ကုလသမဂ္ဂက ဝေဖန်ပြစ်တင်ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံ မအ
Posted: 13 Mar 2015 08:10 PM PDT
ကိုးကန့်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စိန်ခေါ်မှုတွေ အများအပြား ရှိနေပြီးတော့ မကြာသေးခင်နှစ်တွေ အတွင်း တိုးတက်မှုတွေရော၊ ဆုတ်ယုတ်မှုတွေပါ ရှိခဲ့တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ ထိပ်တန်း တာဝန်ရှိသူ တဦးက ပြောလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ရှုပ်ထွေးတဲ့ နိုင်ငံရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှု လုပ်ငန်း စဉ်တွေကြားမှာရောက်နေတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ် UNDP အကြီး အကဲ ဟ
Posted: 13 Mar 2015 08:07 PM PDT
ထိုင်းနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ဆူဖန်ဘူရီခရိုင်ထဲမှာ မြန်မာအလုပ်သမားတဦး ရေနစ်သတ်ခံရပြီး ဇနီးဖြစ်သူ မုဒိမ်းကျင့်ခံရတယ်လို့ ထိုင်းရတ်သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့ မနက်က ဆူဖန်ဘူရီမြို့ လို့ယိုင်ရပ်ကွက်က ရထားလမ်းဘေးအနီး ငါးမွေးမြူရေးကန်ထဲမှာ လူသေအလောင်းတလောင်း ပေါ်နေကြောင်း သတင်းပေးပို့ချက်အရ တာဝန်ကျ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး လူနာတင်ကားတွေ သွားကြည့်တဲ့အခါ ရေထဲမှာ မျောနေတဲ့ အသက် ၃၅ နှစ်ရွယ် လူတဦး
Posted: 13 Mar 2015 08:05 PM PDT
Rakhine News Agency (ကျောက်ဖြူ၊ မတ် ၁၄) မတ်လ ၁၃ရက် ညနေပိုင်းက ကျောက်ဖြူမြို့မှ စစ်တွေမြို့သို့ ထွက်ခွာလာသည့် အောင်တံခွန်- ၃ သင်္ဘောသည် ညပိုင်းတွင် နစ်မြုပ်သွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အဆိုပါ နှစ်ထပ်သင်္ဘောသည် ကျောက်ဖြူမြို့မှ လူဦးရေ ၃၀၀ခန့် နှင့် ကုန်စည်များကို တင်ဆောင်လာပြီး၊ ကျောက်ဖြူမြို့ နှင့် မြေပုံမြို့ အကြား မျောက်ကျွိန်ကျွန်းအနီးတွင် နစ်မြုပ်သွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်လူမှုကွန်ရက် (ကျော
Posted: 13 Mar 2015 03:06 PM PDT
တရုတ်ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Liu Zhenmin က တရုတ်နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးသစ်လင်းအုန်းကို ဆင့်ခေါ်ပြီး ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ အလေးအနက် ပြောကြားတယ်လို့ တရုတ်အစိုးရ အာဘော် ဆင်ဟွာ သတင်းဌာနရဲ့ မတ်လ ၁၄ ရက်၊ စနေနေ့ ရက်စွဲနဲ့သတင်း မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ယူနန်ပြည်နယ်၊ Lincang နယ်စပ်မြို့က ကြံစိုက်ခင်း ကို သောကြာနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက ဗုံးထိမှန်တာကြောင့် အလုပ်လုပ်နေ သူ လေးဦး သေဆုံးပြီး တခြားကိုး
တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် ကိုးကန့်တပ်သားများ လုံခြုံရေးယူထား။ မြန်မာအစိုးရတပ်နဲ့ ကိုးကန့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ အကြား လောက်ကိုင်ဒေသ တ၀ိုက်နဲ့ ချင်းရွှေဟော် တ၀ိုက်မှာ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ရှိနေပြီး ၊ မြန်မာစစ်တပ် ကနေ လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါ နေ့စဉ်လိုလို အသုံးပြု တိုက်ခိုက်နေတယ် လို့ ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ဖက်က ပြောပါတယ်။ ဒီကနေ့ ညနေပိုင်း မြန်မာအစိုးရ ရဲ့ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတခုမှာတော့ တရုတ်နယ်မြေထဲကို ထိမှန်ြ
Posted: 13 Mar 2015 03:05 PM PDT
|| ဒေါက်တာခင်ဝင်းကြူ || ၁၉-၉-၂၀၀၃ခုနှစ်(သောကြာနေ့) ဒီရက်ကိုတော့ ကျွန်မတစ်သက် ဘယ်တော့မှမေ့နိုင်တော့မည် မထင်ပါ။ ကျွန်မအတွက် ထူးထူးခြားခြား ရင်တွေခုန်ရသောနေ့ စိတ်လှုပ်ရှားရသောနေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါသည်။ မီးယပ်သားဖွား အထူးကုဆရာဝန်တစ်ယောက်အဖြစ် အနှစ်(၂၀)ကျော် လူနာများကို ခွဲစိတ်ပေးခဲ့ရသော သက်တမ်းတစ်လျောက် ဒီနေ့လောက် ခွဲရမည့်လူနာအရေးတွေးပြီး စိတ်မလှုပ်ရှားခဲ့ဖူးပါ။ သူမအား ခွဲပေးရမည်ကို စသိသည့်နေ့မှစ၍ ခွဲ
တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးရောဘတ်စန်းအောင်ကို ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ်။ Photo:Kyaw Zaw Win/RFA ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး သာယာဝတီ အကျဉ်းထောင်မှာ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသား ၆ ဦးရဲ့အမှုကို လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ တရား လွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးရောဘတ်စန်းအောင်က ခွင့်ပြုချက် လျှောက်ထားတာကို ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လုံခြုံရေးနဲ့ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးသက်ထွန်းက အမှုစစ်ဆေးနေတဲ့ ကာလြ
ရွှေပါရမီပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်း ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိကပုံ။ Photo: Kyaw Zaw Win/RFA လက်ပံတန်းမြို့က ကျောင်းသားသပိတ်စခန်းကို အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာဟာ အာဏာရှင်အမူအကျင့် မပျောက်တဲ့လုပ်ရပ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ ရွှေပါရမီ ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်း ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက က မိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်။ မတ်လ ၁ဝ ရက်နေ့က လက်ပံတန်းမြို့မှာ ကျောင်းသား သပိတ်စစ်ကြောင်း အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး RFA က လျှောက်ထားမေးမြန်းချက်
Posted: 13 Mar 2015 03:24 PM PDT
ချုပ်ချယ်တဲ့ ဥပဒေတွေ ပြင်ဖို့လည်း ကုလသမဂ္ဂ တိုက်တွန်း။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျောင်းသားတွေ ဦးဆောင်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲ တွေကို အခု သီတင်းပတ် အတွင်း အစိုးရရဲ့ ဖြိုခွဲခဲ့ပုံ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ က ဝေဖန် လိုက်ပါတယ်။ ဖမ်းဆီးခံ ကျောင်းသား တွေ ကို ပြန်လွှတ် ပေးဖို့ နဲ့ ရဲအင်အား အလွန်အကျွံ သုံးခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ သတင်း တွေ အပေါ်လည်း အစိုးရ အနေနဲ့ စုံစမ်း စ⁠စ်ဆေးမှု ပြုလုပ် ဖို့ လည်း ကုလသမဂ္ဂ က တောင်းဆို လိုက် ပါတယ်။ ငြိ
Posted: 13 Mar 2015 03:02 PM PDT
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ် KIA ။ တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးပွဲကို လိုင်ဇာမြို့က လာရောက်မယ့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO က ကိုယ်စားလှယ်တွေကို လိုင်ဇာ- မြစ်ကြီးနား လမ်းက လာရောက်ဖို့အတွက် မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်က သဘောတူညီ လိုက်ပြီး ဒီကနေ့ မြစ်ကြီးနားကို ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးကနေ ရန်ကုန်မြို့ကို သွားရောက်မယ့် ခရီးစဉ်မှာ KIO ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဟာ နေပြည်တော်ကိုလည်း ၀င်ရောက်ဖို့ ရှိပေ
ယွမ် ၈၀၀၀ (ဒေါ်လာ ၁၃၀၀ ခန့်) ဆိုသည့် ပမာဏမှာ ၄ နှစ်အရွယ် ချစ်စဖွယ် မိန်းကလေးငယ် ခင်ခင်ဦးအား အခြားသူတစ်ဦးထံ ရောင်းချ ခဲ့သည့် ဈေးနှုန်းဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်ကွဲ ထားသည့် ဖခင်က ခင်ခင်ဦးကိုရောင်းချခဲ့သည်မှာ ၁ နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်သည်။ ခင်ခင်ဦး ၏ အဖွားဖြစ်သူ မရှမ်းက ၀ါးအိမ်ထဲတွင် ထိုင်ရင်း မြေးဖြစ်သူ၏ ဇာတ်လမ်း အား ပြန်ပြောပြသည်။ “ကျွန်မက ဆန်နဲ့ ပြောင်းတွေ စိုက်ပေမဲ့ သားက ဘိန်းစွဲနေတော့ ကျွန်မတို့မှာေ